Shiinaha Auto Ac kombaresarada Waayo, Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Hollysen
Kombaresarada hawo qaboojiyaha baabuurka waa "wadnaha" nidaamka qaboojinta baabuurta. Marka nidaamka qaboojiyaha baabuurka la shido, kombiyuutarku wuxuu dhaqaajiyaa ficilka, cadaadinta iyo kaxaynta qaboojiyaha iyada oo loo marayo nidaamka qaboojiyaha ee xiran. Qaboojiyaha wuxuu ku nuugaa kuleylka baabuurka dhexdiisa is -dhaafsiga kuleylka ee uumi -bixiyeyaasha, wuxuuna ku fidiyaa kuleylka dibadda baabuurka iyada oo mareysa haamaha, si loo yareeyo heerkulka gaariga oo looga dhigo jawi raaxo leh.
Baadh oo ogow dhibaatooyinka ac
Nidaamka hawo -qaboojiyaha baabuurka ayaa ah hab -wareegga wareegga ee shaabadaysan. Waxay la xiriirtaa raaxada raacitaanka, dhaqaalaha iyo badbaadada gaariga oo si caadi ah u shaqeeya. Si aad u hubiso nidaamka qaboojiyaha ee gaariga Marka hore, waa inaad taqaanaa oo aad fahanto nidaamka hawo-qaboojiyaha ee gaariga, aad u barto mabda'a qaboojiyaha, qaabeynta nidaamka, qaab-dhismeedka, shaqada, iwm. oo aad u yaqaana isdhexgalka iyo shaqada qaabeynta; Waxay ka warqabtaa suurtogalnimada kala duwan ee suurtagalka ah ama fudud si loo soo saaro Astaamaha, waxay keentaa oo ka dhigtaa hababka xallinta fashilka.
Kormeerka iyo tijaabinta kombiyuutarrada qaboojiyaha:
Compressor qaboojiyaha waa wadnaha nidaamka hawo-qaboojinta baabuurta. Waxay mas'uul ka tahay cadaadinta iyo wareejinta dareeraha shaqada ee qaboojiyaha. Sida caadiga ah waa in la hubiyaa oo la tijaabiyaa hufnaanta isku -buuqa iyo baxsiga.
Si loo tijaabiyo hufnaanta cadaadiska ee kombaresarada, iyada oo aan la kala qaadin nidaamka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xiro cabbir saddex-dhinac ah oo loo dhigay imtixaanka.
Marka ay ku jirto xaddi gaar ah qaboojiye nidaamka, mishiinka ayaa dardar geliya. Wakhtigan, tilmaamaha cabbirka cadaadiska hoose waa inuu si cad hoos ugu dhacaa, iyo cadaadiska cadaadiska sare sidoo kale aad buu u kici doonaa. Markay sii weynaato ceejintu, ayay sii weynaataa dhibicda tilmaamuhu, taasoo muujinaysa in kombiyuutarku si fiican u shaqeynayo; haddii ay dardargeliso Tusaha mitirka cadaadiska hoose ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya oo dhibicdu hoos u dhac weyn ma aha, taasoo muujinaysa in wax -ku -oolnimada cadaadiska ee kombiyuutarku hooseeyo; haddii tilmaameha mitirka cadaadiska hoose uusan asal ahaan ka turjumeyn marka la dardargelinayo, waxay ka dhigan tahay in kombiyuutarku uusan lahayn wax -ku -qabad cadaadis haba yaraatee.
Qaybta ugu nugul ee kombaresarada si ay u daadato waa shaabadda shafka (Shidaalka Saliidda). Maaddaama kombuyuutarku inta badan ku wareego xawaare sare iyo heerkulka hawlgalku uu sarreeyo, shaabadda usheeda dhexe ayaa u nugul daadashada. Marka ay jiraan raadad saliid oo ku jira gariiradda xajinta iyo koob nuugista kombaresarada, shaabadda usheeda ayaa hubaal ka daadan doonta.
Sababaha ugu waaweyn ee sida fudud u sababa dhaawaca kombaresarada waa:
1. Nidaamka qaboojiyaha ma aha mid nadiif ah, wasakhda qaybaheeda ah waxaa nuugta kombaresarada;
2. Qaboojiyaha ama saliidda saliidda si xad dhaaf ah ugu jirta ee nidaamka waxay waxyeello u geysataa kombiyuutarka “dubbihii dareeraha”;
3. Heerkulka hawlgalka kombuyuutarku aad buu u sarreeyaa ama wakhtiga hawlgalka ayaa aad u dheer;
4. Kumbuyuutarku wuxuu ku yar yahay saliid aadna wuu u xidhan yahay;
5. Qabsashada elektromagnetic -ka ee kombaresarada iyo heerkulka khilaafku aad buu u sarreeyaa;
6. Qaabaynta awoodda kombaresarada waa mid aad u yar;
7. Tayada wax soo saarka ee kombaresarada waa cillad.
Honda Briyo 2014
Hore: 12v 24v Saqafka Guud ee La Qaadan Karo ee Baabuurka Xamuulka qaada ee Hurdada Korantada Baabuurka Qaboojiyaha Hawada
Xiga: Ac Compressor Warshadaha Warshadaha ee Mazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3